Wadanka Xeebta Fool-maroodi (; ) waa dawlad ku taala Galbeedka Afrika taasi oo xad la wadaagta wadanka Gaana dhinaca koonfureed; xaga galbeedna waxa ay xuduud kala wadaagtaa dalalka Gini iyo Laybeeriya; waxaa xaga bari ka xiga wadanka Mali iyo Burkina Faso. koonfurna waxa ay xuduud laleedahay.gacanka.giniya.iyo badwaynta atlantiga.casimada.siyaasadeed ee wadankaasi waa magaalada yamasakuuro.aakiin magaalada wadanka ugu wayni waa abuja.magacani waxa uu ku baxay ganacsadayaal afrikaana ayaa waxa ay ururinjireen fool maroodiga .kadib waxa ay ku iibinjireen xeebaha wadankaas.dalkani waaxa uu u qaybsamaa.58.gobol.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xeebta_Foolmaroodi&oldid=210580"
Last edited on 28 Maarso 2021, at 16:01
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Maarso 2021, marka ee eheed 16:01.